IXESHA- 'Ibali leSan Marino' iya kuba sesona siganeko sikhumbulekayo senkqubo yehlobo laseSan Marino
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeShishini lokuhlangana » IXESHA- 'Ibali leSan Marino' iya kuba sesona siganeko singalibalekiyo kwinkqubo yehlobo laseSan Marino
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • abantu • Iindaba zeSan Marino • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
IXESHA- 'Ibali leSan Marino' iya kuba sesona siganeko singalibalekiyo kwinkqubo yehlobo laseSan Marino
Ngale ntsasa, ePalazzo Begni, Mnu Augusto Michelotti, Umphathiswa Wezokhenketho, Nksz.Nicoletta Corbelli, umphathi weBhodi yezoKhenketho kunye nomyili weprojekthi kunye nomlawuli wezobugcisa uPhilippe Macina, uzise iTIMELINE- 'ISAN MARINO STORY', owona msitho ubalaseleyo kwiRiphabhlikhi yaseSan Marino yehlobo 2018.
Umnyhadala wachazwa njengodaleko lwemihla yamaXesha aPhakathi kwaye uza kwenzeka nge-27, 28thand 29thJulayi, kwizitalato zedolophu yaseSan Marino ukusuka kwi-17.00 ukuya kwi-24.00 ubuncinci.
Entsha, eyahlukileyo neyonwabisayo, IXESHA sisiphumo sentsebenziswano esondeleyo phakathi kwamaqumrhu karhulumente nawabucala, aphakathi koMphathiswa Wezokhenketho kunye neBhodi yezoKhenketho yaseSan Marino kwelinye icala, kunye noCinephil Srl kwelinye icala. Ngethuba lokuqala, uya kuba nakho ukubuyela umva ngexesha kwaye uphinde ufumane awona maxesha abalulekileyo kwimbali yaseSan Marino, ngokusebenzisa amaxesha amathandathu embali kwaye ubone iindawo apho kwenzeka khona ezo ziganeko.
AmaXesha Aphakathi, kodwa namaxesha amaRoma, i-Renaissance, ixesha le-Risorgimento, kunye ne-WWI kunye ne-WWIIzakubekwa kwifomathi yoqobo kunye nekhonkco eliqinileyo kwiziganeko zembali.
Enye into ebalulekileyo kukuba itikiti kuyakufuneka lihlawulwe ukonwabela imiboniso ebanjwe kuyo yonke indawo embindini wedolophu. Itikiti lokungena liza kunceda abaququzeleli ukuhlawula iindleko ezinkulu zomsitho onjalo kunye nokuphucula amava abo batyeleleyo.
Baza kuba nethuba lokuntywila kwixa elidlulileyo: imbali yeRiphabhlikhi yakudala emhlabeni izakuxelwa ngokulandela ixesha elisebenza ecaleni komda weendonga zedolophu, ezinomthetho owenziwe ngokutsha, imiboniso, imidlalo kunye nemiboniso eyenziwa ngabadlali basekuhlaleni nabangaphandle kunye namagcisa.
Ama-65 abonisa yonke imihla kunye nama-580 amagcisa azibandakanyeyo.
Inani le-off-line kunye ne-intanethi yokunyusa kunye neendlela zonxibelelwano ziya kusetyenziselwa ukunika IXESHA ukubonakala okukhulu kunokwenzeka ngaphambi nasemva komsitho. Imisebenzi yokwazisa iya kubandakanya iipowusta, ushicilelo lukazwelonke nolwasekhaya, iincwadana ezifumaneka kuzo zonke ihotele zeAdriatic Riviera kunye nedesika yolwazi kwipaki yomxholo weMirabilandia, kwimpelaveki ephambi komsitho.
Ingqwalasela eyodwa iya kunikwa kunxibelelwano lwedijithali njengejelo elibalulekileyo lokuxhasa umsitho kunye nokutsala iindwendwe.
Ukusukela namhlanje ukuya phambili, amaphepha asemthethweni omsitho kuFacebook naku-Instagram azakuba kwi-Intanethi. Eyona njongo iphambili kukwenza indawo yoluntu olunokuthi lunxibelelane kwaye luvelise umxholo wabo ecaleni kwezi ezisemthethweni ezipapashwe ngabaququzeleli: iziqwenga zeendaba ezi-6 ngosuku kuthungelwano ngalunye lwentlalo, yonke imihla ukuqala kwiveki ezayo.